डिन पद एक दिन पनि रिक्त राखेर म अनसन तोड्दिनँ: डा. केसी | Nepal Newz
Home > नेपाली समाचारहरु > डिन पद एक दिन पनि रिक्त राखेर म अनसन तोड्दिनँ: डा. केसी
News December 2, 2016 नेपाली समाचारहरु, समसामयिक, स्वास्थ्य	0
‘डिन र त्रिवि उपकुलपतिको बर्खास्तगी मेरो बटमलाइन थियो र अहिले पनि छ’
स्वास्थ्य सेवा र चिकित्सा शिक्षामा व्याप्त बेथिति अन्त्यका लागि २० दिनदेखि अनसनरत डा. गोविन्द केसीले चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) मा रिक्त डिनको पदपूर्तिपछि मात्र अन्य मागमा छलफल हुने बताएका छन्।
केसी अनसनले सिर्जना गरेको दबाबपछि आइओएम डिन डा. केपी सिंहले शुक्रबार आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका हुन्। डा. केसीसँग विगतमा भएको सम्झौताविपरीत त्रिभुवन विश्वविद्यालयले वरिष्ठताको मापदण्ड मिचेर सिंहलाई डिन नियुक्त गरेको थियो।
उनको राजीनामापछि अब पूर्व सम्झौताअनुसार वरिष्ठताका आधारमा तुरुन्तै डिन नियुक्त गर्न माग गर्दै डा. केसीले सेतोपाटीसँग भने, ‘सबभन्दा पहिला रिक्त डिनमा तुरुन्तै पदपूर्ति हुनुपर्यो, वरिष्ठ मध्येबाट डिन बनाएपछि मात्र अरू मागका बारेमा छलफल गर्ने कुरा आउँछ।’ आइओएम डिनजस्तो पद एक दिन पनि रिक्त राख्दा त्यसैबाट चलखेल हुनसक्ने उनले बताए।
‘एक दिन पनि यो पद रिक्त राखेर म अनसन तोड्दिनँ,’ उनले भने।
डिन नियुक्तिका अतिरिक्त त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति तीर्थ खनियाको राजीनामा वा बर्खास्तगीको माग पनि आफू कुनै हालतमा नछाड्ने उनले बताए। ‘डिन र त्रिविका उपकुलपतिको बर्खास्तगी मेरो बटमलाइन थियो र अहिले पनि छ,’ उनले भने, ‘एक जनाले राजीनामा दिएर नयाँ नियुक्तिको निम्ति बाटो खुला गरेका छन्। तर, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा खनिया उपकुलपति रहेसम्म फेरि पनि चलखेल हुनसक्छ। उनी यो संस्थालाई राम्ररी काम गर्न दिँदै दिँदैनन्।’
खनियाले उपकुलपतिका हैसियतमा गरेको अनियमितता र पदीय दुरुपयोगको छानबिन हुनुपर्ने डा. केसीको माग छ।
वरिष्ठता आधारमा डिन नियुक्ति गर्दा डा. जगदीप्रसाद अग्रवाल सिफारिसको पहिलो नम्बरमा थिए। दोस्रोमा डा. केपी सिंह र तेस्रोमा डा. ज्योति शर्माको नाम थियो। यो सिफारिस मिचेर त्रिभुवन विश्वविद्यालयले दोस्रो प्राथमिकताका सिंहलाई डिन बनाएको हो।
सिंह आइओएम प्राध्यापक भएको अग्रवालभन्दा लगभग तीन वर्षपछि हो। अग्रवाल २०५९ फागुन १६ गते प्राध्यापक भएका थिए भने सिंह २०६२ भदौ २७ मा प्राध्यापक भएका थिए। कार्य–सम्पादनकै आधारमा पनि अग्रवाल सक्षम चिकित्सकका रूपमा दरिएका छन्।
यसबीच केसीका मागमा ऐक्यबद्धता जनाउन शनिबार ११ बजे माइतीघरबाट नयाँबानेश्वरसम्म जुलुस आयोजना गरिँदैछ। उक्त जुलुसमा सहभागी हुन डाक्टर गोविन्द केसी सोलिडारिटी अलायन्सले सर्वसाधारणसँग अपिल गरेको छ।